Mixpanel: Tsika, Chiitiko-Chinotungamirwa Analytics | Martech Zone
NeChishanu, Nyamavhuvhu 16, 2013 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Chii chinonzi peji kuona zvine basa kubhizinesi rako? Unoziva here? Une chokwadi here? Ndinoziva kuti dzimwe nguva tinowana tani yetraffic uye hazvina basa, uye dzimwe nguva tinowana kushanya kushoma kunoitisa kuhukama hukuru hwebhizinesi. Iyo yekushambadzira dzidziso ndeyekuti zvimwe zvirinani saka tese tinotevera kutungamira. Asi isu tinofanirwa here?
Isu takanyora nezve zvinoitika analytics pamberi - senge Pirate Metrics emabhizimusi-ekunyoresa-based mabhizinesi. Ichi chizvarwa chitsva che analytics maapplication haashande nema metric akafanana atanga tichishanda nawo kwemakumi maviri emakore apfuura. Ivo vanoshanda pane chiitiko icho mushanyi anotora sezvavanofamba nzvimbo yako.
Mixpanel chiitiko chinotungamirwa analytics chikuva chakavakirwa kugadziridzwa kune chero epamhepo saiti, webhu-yakavakirwa chikuva kana nharembozha.
Mixpanel ndiro zvemberi analytics chikuva che mobile & web. Panzvimbo pekuyera kutarisa peji, zvinokubatsira kuongorora zviito zvinotorwa nevanhu mukushandisa kwako. Chiito chinogona kuva chero chinhu - mumwe munhu achiisa pikicha, achitamba vhidhiyo, kana kugovana posvo, semuenzaniso.
Iyo Mixpanel chikuva inokutendera iwe kuteedzera zviitiko, kushamwaridzana zvivakwa nezviitiko izvi, uye kubatanidza nhoroondo yedhata nevanhu. Apa ndipo panoitika mashiripiti chaiwo! Neprofile yevashanyi yakatarwa, unogona kusefa zvirimo kunongedza mushandisi, kutumira email, kuronga email, kutumira meseji, uye / kana kutanga nhare yekushambadzira nhare.
Uye, hongu, chiitiko chekupedzisira kutenga saka Mixpanel inobata iko kutendeuka zvakare.
Inofambisa Ink: Yechokwadi-Nguva, Yakasarudzika uye Yakaedzwa Email Kushambadzira
Aug 16, 2013 pa 8: 07 AM
Great post Doug! Ndatenda nekugovana! Inodzidzisa chaizvo..